Erayadu waxay isu rogeen astaamo si loo xoojiyo macnahooda | Abuurista khadka tooska ah
Bishii Febraayo nasiib ayaanu la kulannay astaamo qaabeeya qaab-dhismeed yar mid kasta oo qaraabo la ah. Noocyada noocan ah ayaa lagu gaaraa sii xooji xitaa ereyga laftiisa laftiisa markay tixraacayso "bisad" ama "dibi."
In yar ama ka yar waa waxa aan ku hayno Ji Lee iyo maxaa erayada u rog logos iyaga oo leh farriin gaar ah oo iyaga ku jirta oo aan sidaa u sii adagayn in la ogaado. Qaarkood way cadahay kuwa kalena waa hal abuur badan, waana guud ahaan halka aan ku maaraynayno asalka farshaxankan oo, ereyo sifiican looga wada yaqaano dhamaantiis, yaqaan sida loo garaaco furaha saxda ah si loo xoojiyo fariinta.
Lee wuxuu bilaabay inuu ku ciyaaro ereyo sida sawirro ah 20 sano ka hor intii uu ku jiray fasalka qorista ee dugsiga farshaxanka, waana tan iyo markaas ka dib markii uu ku lug lahaa noocyada noocyada iyo astaamaha ah inuu noo soo bandhigo dhammaan aqoontiisa ku saabsan mawduuca.
Akhriso buuggaaga elektaroonigga ah, oo lagu iibiyo Amazon loona yaqaan "Word As Image", wuxuu ku daray dhowr shaqooyin oo dheeri ah, si hufan kuwa aan ku wadaagno xariiqyadan si aad u ogaato shaqadiisa.
Isagu waa kan sharaxa:markii aan yaraa, xarfaha waxay u ekaayeen caruusado lagu maadsado. Waan la ciyaarnay, waanu midabaynay oo xitaa waxaan ogaanay in C-ga uu yahay kii ugu horreeyay ee "Kukiyada" mahadnaqidda Puppets-ka. Muddo yar ka dib xuruuftu waxay noqdeen ereyo, ereyadu weedho. Weedhaha waxaa loo beddelay fikrado iyo wixii la mid ah illaa ugu dambayntii aanaan mar dambe la ciyaarin.«.
Buugiisa waad ku jirtaa Amazonuu Facebook y boggaaga. Erayada sida selfie, dhoola cadeynta ama bixitaanka Waxay qaadanayaan aragti iyo macno badan xuruuftaas oo ku ciyaaraysa qaabab kaladuwan sida ku dhacda bixitaanka ugu dambeeya ee "x" ay ku dhowdahay inuu ka baxo "i" sidii inuu yahay albaabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Erayada ayaa loo beddelay astaamo si loo xoojiyo macnahooda